Abavelisi kuya kufuneka bahlawule uGoogle kwii -apps zabo ze-Android | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo uGoogle wahlawuliswa yi-EU ngesikhundla sayo esibalaseleyo kwi-Android. Inkampani ityholwa ngokunyanzela abenzi beefowuni ukuba bafake iiapps zayo kwizixhobo. Ngesi sizathu, inkampani yaseMelika ngoku ithatha amanyathelo okuqala malunga noku. Ukusukela nge-Okthobha i-29, imigaqo yelayisensi yezicelo ze-Android ziguqulwa kwi-European Economic Area (EEA).
Ngolu tshintsho, abavelisi abafuna ukusebenzisa usetyenziso lukaGoogle kwiifowuni zabo, Kuya kufuneka bahlawule umrhumo kwinkampani yaseMelika. Ke baya kuba nethuba lokukhetha ukuba bafuna ukusebenzisa ezi fowuni okanye hayi.
Kuze kube ngoku, Abavelisi akufuneki bahlawule nantoni na ukusebenzisa iGoogle Play kunye neenkonzo zayo. Nangona kunjalo, imeko yoku kukufaka iGoogle Chrome kunye nokhangelo lukaGoogle ngokwakhona. Kodwa oku kuzakutshintsha ukusuka ngomhla wamashumi amabini anesithoba kule nyanga. Kuba abavelisi baya kuba nakho ukuthenga iiphakheji ezahlukileyo, kunye neelayisensi zeChannel okanye ukukhangela.
Oku kuthetha ukuba abavelisi be-Android akuyi kufuneka babheje kwindibaniselwano ethile ukufumana isatifikethi seGoogle Play. Nangona ngoku uza kufuneka uhlawule iphepha-mvume lokusebenzisa ii -apps zakho kwiifowuni zakho, kuphela ezo zithengiswa eYurophu. Ngaphandle kolu tshintsho, bathi i-Android iya kuhlala isimahla kwaye ivulekile.
Olu lutshintsho olukhulu, kuba abavelisi beefowuni ngoku baya kuba nakho faka ezinye iivenkile zeeapps kwiifowuni zabo. Baya kuba nakho ukusebenzisa ezinye iibrawuza kunye neinjini zokukhangela. Ke utshintsho oluphawuleka kwi-Android malunga noku luza. Ivula ucango lweefolokhwe ze-Android ngale ndlela.
UGoogle uphawule oko Sithetha nje nabavelisi kweefowuni. Ayaziwa okwangoku ukuba kuya kwenzeka ntoni kwezi fowuni zithengiswayo kwezi veki. Ngokuqinisekileyo kwiiveki ezizayo kuya kwaziwa ngakumbi ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » UGoogle uya kuhlawulisa abavelisi ukuba basebenzise iiapps zabo ze-Android
UGoogle akanakuba yirat ...
@ jorge5555 awunakuhlala enyangeni ... okwangoku.
Kuya kufuneka ufunde inqaku kwaye ubone ukuba kutheni uGoogle esenza njalo. Ayilotyala likaGoogle kodwa i-EU kunye nayo (ngamanye amaxesha ayinangqondo) nemithetho yokuchasana.